Stockholm: shantii mid guriyaha oo la iibiyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stockholm: shantii mid guriyaha oo la iibiyey
La daabacay måndag 12 augusti 2013 kl 11.32
Ku dhawaad shantii mid guriyaha degmooyinka gobolka Stockholm ayaa la iibiyey tan iyo 2008, tiradaas oo u dhigmeysa boqolkii 19 guriyaha dadweynaha ee gobolka, sida waxaa lagu sheegey baaritaan uu sameeyey wargeyska SvD.
Degmada Stockholm Stad ayaa iibisey guriyaha ugu badan taas oo ka micno ah in hada degmada ka maqantahay 28000 oo guri. degmooyinka ku xiga ee sidoo kale guriyo badan iibiyey ayaa kalo ah Uppland Väsby, Sundberg, Huddinge iyo Lidingö.
Hadda Kobaca Tillväxtverket ayaa ka digtey in yaraanta guriyaha ay hoos u dhigi karto kobaca dhaqaalaha gobolka Stockholm. Gobolka ayaa la filayaa in dadkiisa ku darsanto nus milyan qof illa sannadka 2030, ayada oo ay weliba maanta aad u adagtahay in guri kiro ah laga helo gobolka Stockholm.